ज्योतिषीसँगको फरक प्रेम- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — मुलुकको राजनीतिमा वर्ष २०७२ ले दूरगामी अर्थ राख्छ । नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र संविधान निर्माण यही वर्षमा भए । यही सेरोफेरो समातेर पत्रकार बसन्त बस्नेतले भने पुस्तक लेखेका छन्– ‘७२ को विस्मय’ ।
राजधानीमा शनिबार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अनसारीले पुस्तक सार्वजनिक गरे । पूर्वराष्ट्रपति यादवले मुलुकमा संविधान जारी भएयता नेपाली राजनीति र राष्ट्रियतामा देखिएका विभिन्न उतार–चढाव पुस्तकमा समेटिएको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले राजधानीको भन्दा तराई–मधेसको मानव सभ्यता पुुरानो रहेको बताउँदै काठमाडौंले तराई–मधेसका सीमान्तकृत नागरिकलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने बताए । ‘यो तथ्यलाई पुस्तकमा शासकीय कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै पूर्वसभामुख नेम्वाङले संविधान सबैको समझदारी र हितमा जारी भइरहँदा भारतले गरेको नाकाबन्दी आफैंमा पत्याउन नसकिने किसिमको रहेको बताए । पुस्तकमा फास्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गर्दा केही संवैधानिक त्रुटि भएको भन्ने विषयप्रति भने उनले असहमति जनाए । आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले सुरुमै आफ्नो विचार व्यक्तिगत रहेको बताउँदै ‘नेपालको भूराजनीतिमा चासो राख्नेका लागि पुस्तक पठनीय रहेको’ बताइन् ।
त्यस्तै राजपाका अध्यक्ष ठाकुरले संविधान घोषणापछि मधेस आन्दोलनप्रतिको धारणा व्यक्तिअनुसार फरक फरक भए पनि पुस्तकमा भने समग्र रूपमा समेट्न खोजिएको दाबी गरे । नेपाल साप्ताहिकमा सहायक सम्पादक रहेका बस्नेतले आफ्नो पुस्तकलाई ‘पोलिटिकल नन फिक्सन’ भनेका छन् ।